I-Ascott Sun Group: Ubambiswano Olusha - nokuthi kusho ukuthini
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Cindezela Izimemezelo » I-Ascott Sun Group: Ubambiswano Olusha - nokuthi kusho ukuthini
Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! • Cindezela Izimemezelo • IVietnam Breaking News
Ngabe ukhulunyiwe kulokhu kukhishwa kwabezindaba, noma uneminye imininingwane ongayengeza?
Ingabe uneminye imininingwane eyengeziwe, izithombe, amavidiyo noma izixhumanisi eziwusizo?
Chofoza lapha ukwamukela lokhu kukhishwa kwabezindaba futhi uthole ukubonakala okuningi.
I-Ascott izophatha amayunithi we-1,905 kumikhiqizo emithathu ehlukanisiwe yokuhlala eSun Group eTay Ho View Complex eHanoi. Intuthuko edidiyelwe iyoba wuphawu olusha lweVietnam, oluguqula indawo ephakeme yedolobha kanye nokuvuselela idolobha elikhethekile ledolobha laseTay Ho. I-Ascott izokwethula umkhiqizo wayo weCrest Collection eVietnam. Njengamanje itholakala eFrance kuphela, kungokokuqala ukuthi iqoqo leCrest liqale e-Asia, linikeze izivakashi isipiliyoni sokunethezeka esiyingqayizivele ngenhlanganisela ehlukile yomlingiswa namagugu. I-Ascott izokwethula nesiginesha yayo i-Ascott The Residence brand kanye nomkhiqizo wayo okhula ngokushesha, iCitadines Aparthotel. I-Ascott The Residence inikeza izivakashi ezinokuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho okukhethekile futhi okwenziwe ngezifiso ngenkathi iCitadines Aparthotel inikeza ukuguquguquka nokusebenza kwekhaya elihlinzekwa ngezinsizakalo zehhotela kanye nokuhlangenwe nakho okwenziwe endaweni. Izindawo zokuhlala ezintathu ezisetshenzisiwe kulindeleke ukuthi zivulwe ngezigaba kusuka ku-1Q 2023.
Emcimbini wokusayinwa okwenzeka phakathi kwe-Ascott ne-Sun Group, uMnu uKevin Goh, Isikhulu Esiphezulu se-CLI seLodging uthe: “Ukwenza ukusebenzisana kwamasu nabadlali bemboni abahamba phambili kuyaqhubeka nokuba isu elisemqoka lokukhula ku-Ascott. Kusinikeza ukufinyelela okusheshayo kwephayiphi yamaphrojekthi wekhwalithi ukukhulisa iphothifoliyo yethu yomhlaba wonke kanye nemali yethu engenayo evela njalo njengoba ivula futhi izinza. Lokhu kuhambisana necebo lokukhanya kwempahla le-CLI. Ukubambisana kweqhinga lika-Ascott ne-Sun Group ukuphatha intuthuko enkulu yokuhlala eVietnam ngemikhiqizo yethu emithathu, kukhombisa ukuzethemba kwabo kubuchwepheshe bomhlaba wonke buka-Ascott kanye nodumo lomkhiqizo. Le phrojekthi kuzoba ngumbukiso ovelele wamandla wokungenisa izihambi ka-Ascott. Sisonke, silindele ukwethula isibani esisha sezakhiwo eVietnam, sihehe izivakashi zasekhaya nezakwamanye amazwe ukuthi zithole ikhaya lazo kude nasekhaya. Ukusebenzisana kwethu kuzobuye kuvule indlela yokuba u-Ascott asebenzisane namanye amaphrojekthi okulala neSun Group ngokuzayo. ”
UNks Nguyen Vu Quynh Anh, oyi-CEO, iSun Hospitality Group (SHG), okuyisikhangiso seSun Group, uthe: “ISun Group ne-SHG bajabule kakhulu ngokubambisana no-Ascott, enye yezinkampani ezihola phambili zokulala emhlabeni, ukufeza umbono wethu weTay Ho View Kuyinkimbinkimbi. Njengephayona embonini yokuhlala ese-Asia Pacific, idumela lika-Ascott lamazwe omhlaba kanye nenethiwekhi kuyinto efanelekayo kakhulu kuphrojekthi yethu esezingeni lomhlaba. Ngokuhlangenwe nakho kwe-Sun Group ne-SHG emisebenzini eminingi esezingeni lomhlaba yaseVietnam efana ne-InterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole - MGallery (Sa Pa), njll kanye nesipiliyoni sokungenisa izihambi sika-Ascott , siqinisekile ukuthi iTay Ho View Complex izoba uphawu lwezakhiwo lwakamuva lwezwe oluzoheha wonke umuntu. ITay Ho View Complex isethwe ukuthi ichaze kabusha amazinga wokungenisa izihambi edolobheni. Ngaphezu kwalokho, lo mklamo uzophinde ukhuthaze ukukhula okuqhubekayo komnotho waseHanoi, udonsele abahamba ngezamabhizinisi nezokungcebeleka kuleli dolobha kanti futhi uzohlinzeka namathuba omsebenzi anengqondo emphakathini. ”
Ukuhlala no-Ascott eTay Ho View Complex, isithonjana esisha sikaHanoi sokwakha
ITay Ho View Complex itholakala kwesinye sezifunda ezikhethekile kunazo zonke zaseHanoi futhi siseduze kweLake Lake elidumile. Ngaphezu kwezindlu ezintathu zokuhlala zika-Ascott, intuthuko edidiyelwe nayo iqukethe izinto zezohwebo nezokuthengisa. ITay Ho View Complex izobe izungezwe amanxusa amaningi, amabhizinisi, izindawo zokudlela nezindlela zokuthengisa. Izophinde ibe seduze kwe-Opera House ezayo ezovulwa ngokuzayo. Izifunda zebhizinisi eliphakathi neHanoi eHoan Kiem, My Dinh naseBa Dinh, kanye naseNui Bai International Airport konke kungaphakathi kwemizuzu engu-20 ukusuka lapho.
I-Ascott The Residence izohlinzeka ngamayunithi ayi-1,167 aqukethe amasudi, isitudiyo, amafulethi anamagumbi okulala amane kuya kwamane kanye namayunithi e-duplex, kanti iCitadines Apart'hotel izohlinzeka ngamayunithi angama-710 aqukethe isitudiyo, amafulethi anekamelo elilodwa kuya kwamane kanye namayunithi e-duplex. ICrest Collection izohlinzeka ngamayunithi angama-28 akhethekile, aqukethe amafulethi angama-duplex anamagumbi amathathu namane. Izakhiwo kulezi zindawo ezintathu zifaka amalounge abahlali, igumbi lokufundela nezindawo zokuvivinya umzimba. Izakhamizi zizophinde zithole izindawo zokudlela ezisezingeni eliphakeme ngabapheki abanenkanyezi kaMichelin noma abadumile emhlabeni abaletha izivakashi e-adventure yokupheka. Kuzoba khona futhi nekilabhu kanye nebha yezulu ebekwe phezu kwentuthuko edidiyelwe yezivakashi eziphumule ngemuva kosuku olude neziphuzo zesiginesha zebha.
Ubukhona buka-Ascott eVietnam
U-Ascott wenza umkhankaso wakhe wokuqala eVietnam eminyakeni engama-27 eyedlule ngokuvulwa kweSomerset West Lake Hanoi. Namuhla, i-Ascott ingumnikazi wendawo yokuhlala omkhulu kunabo bonke ezweni. Ngokwengezwa kwalezi zindawo zokuhlala ezinezinsizakalo ezintathu, iphothifoliyo ka-Ascott eVietnam inezindawo zokulala ezingaba ngu-9,200 30 ezindaweni ezingaphezu kwezingu-12 emadolobheni ayi-XNUMX afana neBinh Duong, Cam Ranh, IDanang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh Idolobha, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa noVung Tau. NgoJuni 2021, isikhwama sangasese sika-Ascott, i-Ascott Serviced Residence Global Fund, sathola i-364-unit Somerset Metropolitan West Hanoi okulindeleke ukuthi ivulwe ngo-2024.